Abaphenyi - ayizisebenzi yemizimba yophenyo. Yiziphi abaphenyi
Abaphenyi aphenya icala lobugebengu. Ngaphandle kwalezi, kungase futhi ukubhekana abaphenyi - kuba izikhulu ngubani ugunyaziwe ukuba afeze nophenyo. Kodwa amandla abaphenyi kanye abaphenyi kuhluke, ngakho udinga ukuthola ukuthi yini abasebenzi amalungelo banemizimba yophenyo.
Abaphenyi, kanye abaphenyi Unelungelo ukuze bafeze imisebenzi okuphenya ngesikhathi kuphenywe icala lobugebengu. Kodwa uma ofeza ngesimo inqubo yophenyo ukubandakanya umsolwa njengoba ummangalelwa akuyona kuvame ukwenziwa. On kokuphothulwa kophenyo iyawakha le icala.
- hlola, kanye nombono imibiko zazenza ubugebengu obubi futhi uzilungiselele;
- ukuthatha izinqumo ngemva kokuhlaziya imiyalezo ehlukahlukene amacala.
Ngaphezu amalungelo abaphenyi ube nemithwalo yemfanelo ethile:
- bafeze imisebenzi kumigomo lwezobulungiswa;
- sebenzisa izinyathelo sibhekwe ukuthi kuvunyelwe ngumthetho;
- isenzo ngokuhambisana imiyalelo yenduna umzimba yophenyo nomshushisi;
- Ukuze amazwe nokufeza eminye imisebenzi njengoba kuyabekwa ngumthetho.
Ubani kugunyaziwe uphenyo:
- Izidumbu zabantu abangu-ezindabeni zangaphakathi ;
- nabasebenzi emizimbeni wamasiko amasevisi;
- zeNhlangano State Izidakamizwa Control;
- Abasebenzi isevisi umngcele.
isimo umphenyi lutholwa noma ngeposi noma obeka amandla abafanele we Lenhloko yemtimba yophenyo.
Ukugunyaza neziqondiso umshushisi
Abaphenyi - kuba izinceku kufanele bavunyelwe umshushisi lokufeza ezinye izenzo ezidingekayo ukuze kuphenywe. Imiyalelo ihloko yehlangano yophenyo, namkha umtjhutjhisi, kufanele kwenziwe nakanjani, ngisho noma umphenyi alivumelani ukuthi zibalulekile ukwenza icala. Unegunya ukukhalaza imiyalelo, kodwa kufanele bakhumbule ukuthi lokhu akusho sokumisa ukukhishwa kwabo kuze isinqumo.
Uyini umehluko phakathi abaphenyi kanye abaphenyi?
Abaphenyi - ayizisebenzi yemizimba yophenyo nge igunya lokufeza imisebenzi okuphenya ngesikhathi kuphenywe icala lobugebengu. Abakwazi bebodwa ukuqalisa futhi senqabe ukuthobela imiyalelo umshushisi. Abaphenyi abathintekayo emacaleni eziyinkimbinkimbi lobugebengu. Bangakunikeza abaphenyi imfundo okulotshiwe ngokuphathelene imisebenzi yokusesha kumele kwenziwe nakanjani. Abaphenyi unamalungelo kakhudlwana futhi amandla, kanye aphenya amacala obugebengu kanye isakhiwo eziyinkimbinkimbi yobugebengu.
ukuzimela ngokwenqubo ye umphenyi kungaphezu lo mseshi, njengoba yokugcina incike zonke ihloko yehlangano okwenza nophenyo futhi umshushisi, ngoba kufanele uhambisane kungakhathaliseki imibono yabo.
Umphenyi banesibophezelo sezenzo zabo futhi izinqumo kanye umseshi.
Ngaphambi inkantolo kokuzwa sokuqulwa kwecala - nophenyo. Kutholakale izidumbu ezimbili yangaphakathi izindaba amacala obugebengu kungenzeka indlela efingqiwe yokubhala igama yophenyo. Lokhu kusho ukuthi isinqumo we amasamanisi zizokwenziwa ku kokuphothulwa kophenyo.
Abaphenyi - wezengqondo ezicashile, possess amakhono nolwazi ukuqhuba uphenyo owandulela ukuqulwa kwecala. Kumele bachubeke bente nophenyo, ozokusiza icala lobugebengu liye, efomini uphenyo.
Lemisebenti yemizimba yophenyo
Baqhuba kwesikhashana uphenyo, uphenyo, ukuqinisekisa isicelo lesifanele yomthetho, kanye nokusiza ngokushesha ukuxazulula ubugebengu. Kuyinto akuwona neze umsebenzi olula, izidumbu nophenyo amaphoyisa kufanele enze inembe kunazo.
Abaphenyi abanalo ilungelo lokwenza isinqumo sokuba ashushiswe umsolwa njengoba ummangalelwa. Bangakwazi kugcinwe icala isimo, okuyinto lwenziwe ngendlela uphenyo. Kufanele kuqashelwe ukuthi umseshi ayikwazi senqabe ezifeza iziyalezo of umshushisi, kodwa unelungelo ukuba uphikise umshushisi yabo ephezulu simo. Kubalulekile futhi ukuthi akabakhathalele kangakanani abantu ilungelo isinqumo, okuyinto wamukelwa umtjhutjhisi emlandwini wokuthoma.
Noma yimuphi uMnyango amaphoyisa kuhlanganisa umnyango uphenyo, okuyinto lucwaningo uphenyo owandulela ukuqulwa kwecala. Zixhumana nabantu nomunye, lapho umsebenzi iyashelela okuningi. Umnyango wamaphoyisa kanye nophenyo luqondiswe uMthethosisekelo, umthetho, izivumelwano, imithetho, kanye nemithetho.
Umphenyi - lo mbuzo ukuphoqelelwa isikhulu. Esingatha uphenyo owandulela ukuqulwa kwecala ngokuhambisana nomthetho. umsebenzi wayo iyafana umsebenzi womphenyi, kodwa encipha. Umphenyi owenza zonke izinqumo nezenzo zabo, ngakho-ke kufanele isebenze ngokomthetho futhi ukuba nizifeze zonke imisebenzi.